Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 18:1-35
18 Panguva iyoyo vadzidzi vakaswedera pedyo naJesu, vakati: “Ndiani mukuru kune vamwe vese muUmambo hwekudenga?”+ 2 Saka akashevedza mwana mudiki, akamumisa pakati pavo, 3 akati: “Chokwadi ndinoti kwamuri, kana mukasatendeuka* mova sevana vadiki,+ hamungambopindi muUmambo hwekudenga.+ 4 Saka munhu wese achazvininipisa semwana uyu mudiki ndiye mukuru kune vamwe vese muUmambo hwekudenga;+ 5 uye munhu wese anogamuchira mwana mudiki mumwe chete akadai nekuda kwezita rangu anondigamuchirawo. 6 Asi munhu wese anokanganisa kutenda kwemumwe* wevadiki ava vanotenda mandiri, zviri nani kuti asungirirwe mumutsipa make zidombo guru riya rinotenderedzwa nedhongi pakukuya, onyudzwa pakati pegungwa.+ 7 “Ine nhamo nyika nekuda kwezvinhu zvinogumbura! Ichokwadi kuti zvinogumbura hazvingatadzi kuuya, asi ane nhamo munhu anokonzera kuti pave nechinhu chinogumbura! 8 Saka kana ruoko rwako kana tsoka yako ichiita kuti ugumburwe,* idimbure uirasire kure newe.+ Zviri nani kuti upinde muupenyu wakaremara kana kuti uchikamhina pane kukandwa mumoto usingaperi uine maoko maviri kana tsoka mbiri.+ 9 Uyewo, kana ziso rako richiita kuti ugumburwe,* ritodogore urirasire kure newe. Zviri nani kuti upinde uine ziso rimwe chete muupenyu pane kukandwa uine maziso maviri muGehena* remoto.+ 10 Mungwarire kuti musazvidze mumwe wevadiki ava, nekuti ndinokuudzai kuti ngirozi dzavo dziri kudenga dzinogara dzichiona chiso chaBaba vangu vari kudenga.+ 11 * —— 12 “Munofungei? Kana mumwe munhu aine makwai 100 rimwe rawo rorasika,+ haangasiyi 99 acho mumakomo oenda kunotsvaga rarasika racho here?+ 13 Uye kana ariwana, chokwadi ndinokuudzai, anorifarira chaizvo kupfuura 99 asina kurasika. 14 Ndizvo zvinoitwawo naBaba vangu* vari kudenga; havadi kuti kunyange mumwe chete wevadiki ava aparare.+ 15 “Zvakare, kana hama yako ikatadza, enda unomuudza mhosva yake* muri mega.+ Kana akakuteerera, wawana hama yako.+ 16 Asi kana akasateerera, enda nemumwe kana vamwe vaviri, kuti nyaya yacho itongwe papiwa uchapupu hwevanhu vaviri kana vatatu.*+ 17 Kana akasavateerera, taura neungano. Kana akasateerera kunyange ungano, ngaave kwauri semunhu wemamwe marudzi+ uye semuteresi.+ 18 “Chokwadi ndinoti kwamuri, zvinhu zvese zvamungasunga panyika zvichange zvatosungwa kudenga, uye zvinhu zvese zvamungasunungura panyika zvichange zvatosunungurwa kudenga. 19 Chokwadi ndinokuudzai zvakare, kuti kana vaviri venyu panyika vakabvumirana pamusoro pechimwe chinhu chinokosha chavanofanira kukumbira, vachachiitirwa naBaba vangu vari kudenga.+ 20 Nekuti pane vaviri kana vatatu vakaungana muzita rangu,+ ini ndiripo pakati pavo.” 21 Petro akabva aswedera kwaari, akati: “Ishe, hama yangu inganditadzira kangani ini ndichiikanganwira? Kanosvika ka7 here?” 22 Jesu akati kwaari: “Ndinoti kwauri, kwete kanosvika ka7, asi kanosvika ka77.+ 23 “Ndokusaka Umambo hwekudenga hungafananidzwa namambo aida kugadzirisa nyaya dzemari dzake nevaranda vake. 24 Paakatanga kugadzirisa, mumwe murume akanga aine chikwereti naye chematarenda 10 000* akaunzwa kwaari. 25 Asi nekuti akanga asina chekubhadhara nacho chikwereti chacho, tenzi wake akati iye nemudzimai wake nevana vake nezvinhu zvese zvaakanga ainazvo zvitengeswe kuti chikwereti chacho chibhadharwe.+ 26 Saka muranda wacho akazviwisira pasi, akamupfugamira, achiti, ‘Ndiitireiwo mwoyo murefu, ndichakubhadharai mari yenyu yese.’ 27 Asiririswa nazvo, tenzi wemuranda iyeye akamurega achienda, akadzima chikwereti chake.+ 28 Asi muranda wacho akabuda akawanawo mumwe muranda saiye, aiva nechikwereti naye chemadhinari* 100, uye akamubata, akatanga kumudzipa, achiti, ‘Bhadhara chikwereti chako chese.’ 29 Saka muranda uya akazviwisira pasi, akatanga kumuteterera achiti, ‘Ndiitirewo mwoyo murefu, ndichakubhadhara mari yako.’ 30 Asi akanga asingadi, uye akaenda, akaita kuti akandwe mujeri kusvikira akwanisa kubhadhara chikwereti chake. 31 Vamwe varanda pavakaona zvakanga zvaitika, vakarwadziwa chaizvo, vakanomhan’ara kuna tenzi wavo zvese zvakanga zvaitika. 32 Tenzi wake akabva amushevedza, akati kwaari: ‘Muranda akaipa, ndakakudzimira chikwereti chako chese chiya pawakanditeterera. 33 Watadzawo kunzwira tsitsi mumwe muranda sewe sekukunzwira tsitsi kwandakaita here?’+ 34 Saka tenzi wake, ashatiriswa, akamuisa kuvarindi vejeri, kusvikira abhadhara chikwereti chake chese. 35 Baba vangu vekudenga vachakuitiraiwo izvozvo+ kana mumwe nemumwe wenyu asingakanganwiri hama yake zvichibva pamwoyo.”+
^ Kana kuti “mukasachinja.”
^ Kana kuti “anogumbura mumwe.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “venyu.”
^ ChiGir., “unomutsiura.”
^ Matarenda 10 000 esirivha ainge akaenzana nemadhinari 60 000 000. Ona Mashoko Ekuwedzera B14.